Japana · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Japana
Eoropa Afovoany & Atsinanana08 Aogositra 2021
Mediam-bahoaka03 Marsa 2021
Fahasalamàna11 Janoary 2021
Fahasalamàna 7 andro izay
"Ny hamafin'ireo torohay mitsena anao any anaty mozea sy ny trano famakiamboky - na ny fahanginana tampoka ao an-jaridaina - dia mety hiteraka valin-kafatra hivoaka ho azy ao anaty tsinainao."
Media sy Fanoratan-gazety 4 herinandro izay
Japàna miatrika ny olan'ny “Mega Solar”
Mediam-bahoaka 26 Marsa 2022
Lazain'ireo mponina sasany mipetraka eny akaikiny hoe manimba ny tontolo iainana sy zara raha mitondra tombony ho an'ireo vondrompiarahamonina manodidina azy ireny "toerana goavambe fakàna angovo amin'ny masoandro" ireny.
Fandraràna tsy hivezivezy, Japàna sy izaho
Mediam-bahoaka 21 Febroary 2022
Noho ireo fandraràna henjana, ary amin'ny lafiny sasany, tena tsy takatry ny saina, ataon'i Japàna noho ny fisian'ny COVID-19 amin'ny fivezivezen'ireo vahiny, sarotra ny hilaza hoe rahoviana aho no ho afaka hiverina.
Mediam-bahoaka 24 Janoary 2022
Manontany ny vahoaka hoe tena ilaina ve ny zotra vaovao shinkansen Kyushu Andrefana, izay manasarotra ny fandehanana any amin'ny faritra sasany ary vita amin'ny ampahany fotsiny.
Fahasalamàna 20 Janoary 2022
Ho an'ny sasany, tsy ampy hiatrehana ny fandrahonan’ny COVID-19 amin'izao fotoana ny "mambo" ao Japana izay heverin’izy ireo fa ny tafika Amerikana no nahatonga izany.
Fifindràmonina 29 Desambra 2021
Fifidianana 09 Novambra 2021
Mbola tsy nety nahazo vato betsaka avy amin'ny mpifidy ihany ireo antoko mpanohitra, na dia nisy aza ireo ezaka handrindrana ny asam-panentanana nataon-dry zareo.
Fivavahana 26 Oktobra 2021
Mediam-bahoaka 01 Oktobra 2021